Global Voices teny Malagasy » Ny Ao Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Tiorka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Novambra 2017 3:19 GMT 1	 · Mpanoratra Deborah Ann Dilley Nandika Miranah
Noraisina tsara tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Tiorka ny andiana Bilaogy Tiorka tamin'ny herinandro lasa teo, ary nahitana dikanteny Tiorka tamin'ny lahatsoratra  tao amin'ny tranokala Blog Kardesligi mihitsy aza. Tsy ny dikanteny ihany no tao amin'ny Blog Kardesligi fa fanehoan-kevitra momba ny tetikasan'ny Global Voices (amin'ny teny Tiorka)  ihany koa. Nisy ireo tranonkala Tiorka hafa nanonona ny lahatsoratra Global Voices, anisan'izany ny Metrobloggling: Istanbul  sy Ignore Me if You Can . Ankoatra izany, nahazo fisaorana maro momba ireo lahatsoratra ihany koa aho. Nahatsiaro voadoka tanteraka aho ary manantena fa afaka manao ny rariny amin'ireo bilaogy Tiorka ankehitriny sy amin'ny hoavy.
Noho izany, andeha hiresaka fihariana …. Andininy anankiray: Tranonkala miompana amin'ny sakafo mahafinaritra antsoina hoe Portakal Agaci (Hazo Laoranjy) , raha amin'ny teny Tiorka izany, dia tranonkala mahafinaritra ahitana sary manintona dia manintona!
Mikasika ny Fidiran'i Torkia tamin'ny fampiraharahana ofisialy miaraka amin'ny Vondrona Eoropeana , izay niresahanay ny tranga tamin'ny herinandro lasa teo. Ny bilaogy Mavi Boncuk , izay mifantoka amin'ny famoahana lahatsoratra sy vaovao momba an'i Tiorkia, ny ankehitriny sy ny lasa kosa dia namoaka lahatsoratra vao haingana mikasika ny resak'i Torkia tamin'ny Vondrona Eoropeana . Manontany ny anton'ny faniriana ankehitriny hiditra ao amin'ny Vondrona Eoropeana ny lahatsoratra, ary manontany ny fahombiazan'ny fidirana amin'ny antoko politika izay mihalehibe toy izao. Fa tsy haiko ny milaza izany araka ny fomba firesahan'ny lahatsoratra azy, ity sombiny kely:
Olana hafa atrehin'ny Vondrona Eoropeana sy Torkia ny olana momba ny gripam-borona, izay loha-laharana amin'ny fandaharam-potoanan'ny Vondrona Eoropeana  amin'ity herinandro ity. Metin avy ao amin'ny Talk Turkey  indray nanoratra mikasika ny gripan'ny vorona sy ny fahitana azy vao haingana tao amin'ny tanàna roa ao Torkia , izay nitarika ny fandringanana ireo vorona. Nanoratra izy fa raha mbola vaovao ny zava-misy, dia azontsika antoka ny hahafantatra bebe kokoa momba izany amin'ny hoavy raha mitohy ny valan'aretina. Yildiz, avy amin'ny bilaogy mitondra ny anarany ihany, Yildiz  (Tiorka) nanoratra momba ny fahataitairana mahery vaika noho ny gripam-borona sy ny fahitana azy vao haingana tany Torkia sy Romania. Ny zavatra tiako indrindra momba ity lahatsoratra manokana ity dia ny sarina lela tonga eo amin'ny takolaka miaraka amina zanaka gana fotsy telo.
Amin'ny herinandro manaraka, mikasa ny hitatitra ny sasany amin'ireo bilaogy tononkalo Tiorka aho, satria zava-kanto nentim-paharazana efa ela tany Torkia  ny tononkalo; ary hitati-baovao/zava-miseho ihany koa izahay ary antenaiko fa hisy koa ny fandraisam-peo  sasany!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/23/110753/
 Bilaogy Tiorka : http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/2005/10/08/the-turkish-blogs-a-drop-in-the-ocean/
 dikanteny Tiorka tamin'ny lahatsoratra: http://blogkardesligi.blogspot.com/2005/10/trke-bloglar-okyanusta-bir-damla.html
 fanehoan-kevitra momba ny tetikasan'ny Global Voices (amin'ny teny Tiorka): http://blogkardesligi.blogspot.com/2005/10/globalvoices.html
 Portakal Agaci (Hazo Laoranjy): http://www.portakalagaci.com/
 fampiraharahana ofisialy miaraka amin'ny Vondrona Eoropeana: http://maviboncuk.blogspot.com/2005/10/op-ed-austrias-shoddy-gambit-on-turkey.html
 resak'i Torkia tamin'ny Vondrona Eoropeana: http://maviboncuk.blogspot.com/2005/10/comment-turkey-croatia-balkans-and.html
 loha-laharana amin'ny fandaharam-potoanan'ny Vondrona Eoropeana: http://www.indystar.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051015/NEWS01/510150464/1012/NEWS06
 gripan'ny vorona sy ny fahitana azy vao haingana tao amin'ny tanàna roa ao Torkia: http://www.talkturkey.us/2005/10/bird_flu_pandem.html
 fahataitairana mahery vaika noho ny gripam-borona : http://yildizozturk.blogspot.com/2005/10/olur-mu-olur.html
 tononkalo Tiorka : http://www.cs.rpi.edu/~sibel/poetry/translation.html
 zava-kanto nentim-paharazana efa ela tany Torkia: http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_literature